Famolavolana maivana sy mateza amin'ny bobongolo
Visor azo esorina.
Mora ny manitsy ny rafitra mety.
Hery mangatsiaka manaitra
Karazana vokatra Fiarovan-doha bisikileta
Laharana maodely Moutain bisikileta VM202
TECHNOLOGY EPS + PC in-bobongolo
endri-javatra Rivo-drivotra mahery, fampifanarahana loha, famolavolana lamaody
Manitatra safidy visor azo esorina amin'ny bolts
Manomboka amin'ny fiakarana lava mankany amin'ny fidinana mahavariana, ara-teknika, ny fiarovan-doha an-tendrombohitra VM202 dia mitaona ny dianao na aiza na aiza alehan'ny lalana. Ny endriny mifintina dia manolotra fandrakofana lalina sy azo antoka ary rafitra fanamorana azo alain-tahaka rehefa manatsara ny fitony. Ho fanampin'ny herinaratra fampihenana an'io fiarovan-doha io dia nitafa tamina kodiarana hydrophilic sy anti-bakteria izay afaka mifoka folo heny ny lanjany amin'ny hatsembohana. Ny fiarovan-doha an-tendrombohitra ho an'ny mitaingina eny ivelan'ny arabe miaraka amina endrika tsy misy mombamomba azy, fandrakofana tsara, rivotra sy rivotra mateza ary maharitra matevina. Vonona ho an'ny zava-drehetra, manomboka amin'ny fitsangatsanganana an-tsokosoko ka hatramin'ny mitaingina lalana. Ny fiarovan-doha amin'ny bisikileta dia mitazona anao ho milamina sy mahazo aina, miampy na visor azo esorina izay mamily ny masoandro, orana, borosy ary rantsana.
Fehin-kibo polycarbonate feno famonosana feno miaraka amina liner EPS hanoherana ny lakaingo sy ny dings izay mahatonga endrika mendrika kokoa. Ny tsipika fifampiraharahana miaraka amin'ny banga faran'izay kely dia kely ary madio, na dia mitaky teknolojia avo lenta avo lenta kokoa aza izy io ary marina tsara ny fitaovana bobongolo EPS sy Vacuum.
Ny fonosana mangatsiaka avo lenta dia mitazona ny volo ho maina sy mahavariana mandritra ny mitaingina azy ary manome fiononana tsara kokoa miaraka amin'ny rivotra mihamitombo, nanamboatra pads maro amin'ny fitaovana sy teknolojia vaovao ho an'ny safidin'ny ODM isika: landy silika, antibaktera / volotsangana, lamination PC / PP ary padding seamless TPU.
Ny fiarovan-doha voafaritra miaraka amina tadiny maivana maivana ary azo asongadina amin'ny tarika taratra, sublimation ary ravin-tsolika, manolotra safidy fehin-kibo hafa ho an'ny fanamboarana: tenona maro loko, volotsangana ary fehy fanoherana bakteria.
Ny famoahana ITW haingana ao amin'ny fitaovana Derlin POM hanamafisana ny fihazonana sy ny fitsapana mihodina mba hiantohana ny fiarovana ny fiarovan-doha.
Haingana sy mora ny fanitsiana mety, ny rafitra mety dia azo ahitsy amin'ny toerana telo ary manao izay mety indrindra ahazoana aina rehefa manitsy ny fihenjanana amin'ny fihodinan'ny fingotra, famolavolana maivana miaraka amin'ny fitaovana ST801 sy POM ho an'ny faritra manakiana dia manintona tena hentitra, ilay mety ny rafitra dia azo soloina mora foana aorian'ny fampiasana maharitra.
Teo aloha: MTB Bike Helmet VM203
Manaraka: E-Bike Scooter V01